Tag: LOL | Martech Zone
Ny tantaran'ny famolavolana mailaka sy mailaka
Talata, May 9, 2017 Alakamisy, May 11, 2017 Douglas Karr
44 taona lasa izay, Raymond Tomlinson dia niasa tao amin'ny ARPANET (praiminisitra amerikana misahana ny Internet azo ampahibemaso), ary namorona mailaka. Raharaha lehibe tokoa io satria hatrizay dia tsy afaka mandefa hafatra sy mamaky an'io solosaina io ihany. Io dia namela mpampiasa sy toerana iray nosarahan'ny marika &. Rehefa nasehony ny mpiara-miasa amin'i Jerry Burchfiel, ny valiny dia: Aza miteny an'iza n'iza! Tsy izany no tokony hiasanay